Ergayga Gaarka ah ee Mareykanka u qaabilsan Geeska Africa oo is-casilaya | dayniiile.com
Home WARKII Ergayga Gaarka ah ee Mareykanka u qaabilsan Geeska Africa oo is-casilaya
Ergayga Gaarka ah ee Mareykanka u qaabilsan Geeska Africa oo is-casilaya
Ergeyga gaarka ah ee Maraykanka u qaabilsan Geeska Afrika David Satterfield ayaa xilka ka tagaya kahor bisha June, sida ay sheegeen ilo-wareedyo arrintan la socday, kadib markii uu xilkaas la wareegay wax ka yar lix bilood, iyadoo xilligan uu qalalaase siyaasadeed gobolka ka taagan yahay.
Ku xigeenka ergeyga gaarka ah Payton Knopf ayaa xilka si kumeel gaar ah ula wareegi doona, sida ay tilmaameen ilo-wareedyadu, iyagoo intaas ku daray in bixitaanka Satterfield aysan ahayn mid degdeg ah.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda ayaa wax yar kahor ku dhawaaqday in Satterfield iyo Knopf lagu wado inay yimaadaan Itoobiya Arbacadan, si ay kulamo ula yeeshaan saraakiisha dowladda Itoobiya, wakiillada ururada samafalka, iyo saaxiibada diblomaasiyadeed.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda ayaan wax faallo ah ka bixin markii wax laga waydiiyay tegitaanka Satterfield.
Warka ku saabsan bixitaanka Satterfield ee la filayo, oo ay markii ugu horreysay soo warisay majaladda Foreign Policy, ayaa kusoo beegantay xilli ay dhibaatooyin badan ka dhaceen gobolka.
Previous articleTaliska Ciidanka xoogga oo soo bandhigay Xubin katirsan Al-Shabaab oo isku soo dhiibay
Next articleGuddoomiyaha FEIT & Xubno katirsan Guddiga oo Baydhabo gaaray.
RW Rooble oo Madaxweyne Xasan Sheekh ugu baaqay in uu dalka...
Wasiir Beyle oo mas’uuliyiin katirsan UK & Sweden kala hadlay Arrimaha...